Iinkonzo Profanas nguRubén Darío | Uncwadi lwangoku
Olunye lweempawu eziphambili ze URubén Darío Yayikukuhlaziywa kwemetric kunye nokuthetha apho wafaka khona imibongo ngombulelo kwizinto zakhe ezintsha kule ndawo, ezivakala ngaphezu kwayo yonke eminye yemisebenzi yakhe, engekho enye ngaphandle kwe "Profane Prose". Le ncwadi, ihlelwe yapapashwa okokuqala eBuenos Aires ngo-1896, imele uloyiso lwala maxesha kwi-aesthetics yaseRubendarian kunye nomzuzu wayo wobuninzi.
Izinto ezintsha zivela kwitayitile uqobo lwayo kuba ngegama elithi iprozi libhekisa kwii-hinnos ezithile eziculwa kwezinye iiMass emva kokufundwa kweVangeli kwaye ngegama elihlambalazayo liyalikhaba ngabom ixesha lokuqala, ngaloo ndlela livuma umtsalane othile kwaye kwangaxeshanye ixesha ukwaliwa okuthile ngakwi inkolo yemveli yekatolika.
Umxholo wale ncwadi uyaqhubeka ukusibonisa umahluko oqinileyo ukusukela, kwelinye icala, unendlela yeengcungcu yokubaleka kwinyani yentlalo angayithandiyo, kwelinye icala ibonisa ubunzulu inkxalabo kwezentlalo, ngesitayile esinyulu semisebenzi yakhe yakuqala. Kuwo onke amaphepha enza "Prosas profanas" UDarío ubuza yonke into emngqongileyo, enje ngobomi nokufa, inkolo yakhe, imibongo, ubugcisa ...
Ukongeza kubukho beSpanish kwimixholo ethile enje nge "Elogio a la Seguidilla" okanye izingqinisiso zakhe kwiCid, ulonwabo ngomnye wemixholo emikhulu yomsebenzi apho abafazi bachonga izinto ezahlukeneyo zendalo: ubunyulu behobe, ubundlobongela behlosi, ubungozi bolwandle ...
Ngaphandle kwamathandabuzo sijamelene nenye yeendawo eziguqukayo zemibongo yaseSpain, etshintshe ngokupheleleyo emva kokupapashwa kwale wobugcisa.
1 Yintoni intsingiselo yeProfane Prosas?
1.1 Isigama esisetyenziswa nguRubén Darío
2 Zeziphi izihloko ajongene nazo Prosas Profanas?
3 Yintoni yonke imibongo equlunqwayo?
Yintoni intsingiselo yeProfane Prosas?
Iprose proane ye URubén Darío Ngokwenene iseti yemibongo ebhalwe yimbongi ngokwayo kwaye inxulumene nelizwe eliyimfihlakalo nelimnandi. Kuyo, unako fumana amakhosazana, ookumkani, oosaziwayo, oosaziwayo, kunye nabanye abaninzi abasentsomini.
Incwadi yantlandlolo Prosas profanas yapapashwa eBuenos Aires ngo-1896, kodwa hayi ngesihloko esaziwa ngaso ngoku, kodwa "njengamazwi e-liminal." Ukongeza, yayiquka imibongo engama-33 kuphela eyasasazwa ngezahlulo ezisixhenxe (nganye inemibongo emininzi enika ubunzulu obukhulu kwinxalenye yesibini).
Nangona kunjalo, umbhali wayengonelisekanga kwaphela, kwaye eParis, ngo-1901, uRubén Darío wenza ushicilelo lwesibini lwencwadi yakhe, esongeza eminye imibongo emi-3 kunye nokutshintsha igama lakhe. Imbali yeminye yale mibongo iyaziwa, efana naleyo ka "Blasón", oyibhalileyo eMadrid xa bekubhiyozelwa ikhulu leminyaka kaColumbus; okanye "I-Colloquium yee-centaurs", apho wayigqiba khona etafileni eLa Nación apho intatheli, uRoberto Payró, wayebhala inqaku.
Gcina ukhumbula ukuba kuRubén Darío le ncwadi yenye yezona zibalaseleyo azibhalayo, Ngokukodwa kuba ngelo xesha wayephezulu emsebenzini wakhe njengembongi kwaye yonke into eyayiphuma engqondweni yakhe yayiphumelele kakhulu. Ke, kuthathelwa ingqalelo ukuba yabhalwa ngexesha lokudubula kombhali. Yena ngokwakhe uyichaza njenge "Ntwasahlobo yakhe eNgcwele."
Zombini ezi Prosas profanas kunye neAzul, ezona ncwadi zimbini zidumileyo zombhali, zikhokelela kumongo wale mihla wembongi, kwaye uyabona ukuba kukho phi uguquko olukhulu ngokubhekisele kwimfezeko nasekuvuthweni, yiyo loo nto ibaluleke kakhulu.
Ngoku, iyintoni intsingiselo yeProane Prose? Ewe, ngokutsho kombhali, imibongo nganye, kwaye uninzi phakathi kwabo, lwalunjalo Ingoma, ilizwi elijolise kwimixholo awayejongane nayo emsebenzini wakhe. Nokuba luthando, uyilo, abafazi ... Elona gama "Prosas" lalisele lisetyenziswa kumaXesha Aphakathi kwaye babehlala bebhekisa kumbongo wesiLatin owawungumvuzo kwabaNgcwele. Ngesi sizathu, wasebenzisa elo gama esongeza igama "elihlambeleyo" ukubhekisa kwimiba yehlabathi, Oko kukuthi, ubomi bemihla ngemihla kubantu abaqhelekileyo.
Isigama esisetyenziswa nguRubén Darío
URubén Darío ungomnye weembongi ezibalulekileyo zexesha lakhe. Kwaye indlela azivakalise ngayo yathathela ingqalelo into yokuba wayenomdla kakhulu ngamazwi. Ngapha koko, nangona banokungayiqondi ngamanye amaxesha, i umthwalo weemvakalelo zokuba amazwi akhe enze imibongo yakhe ibeke umfundi okanye umphulaphuli kuloo ndawo ayifunayo, ukukhupha iimvakalelo, iimvakalelo, njl. Ukwenza oku, wahlangula namagama angasasetyenziswanga, lawo angasasetyenziswayo nanamhlanje, nangona esaziwa. Sithetha, umzekelo, nge "algazara", njengokugcoba kwamazwi; okanye "Push", uyiqonde njengokutyhala kwinto ethile okanye komnye umntu.
Zeziphi izihloko ajongene nazo Prosas Profanas?
Umsebenzi kaRubén Darío wonke yincwadi egxile kwimixholo eliqela ebuhlanti bakhe, njenge abasetyhini, uthando, inkanuko, ubugcisa, inkxalabo, iintsomi ...
Xa echukumisa umxholo wabasetyhini, zonke iivesi kunye neengcinga zikaRubén Darío zijolise ekunquleni loo mntu, ekuziva esondele kuye kwaye esithi uyathamba, uthambile, uthando olumnandi. Nangona kunjalo, kwinxalenye ye-eroticism, imbongi iyatshintsha, iba yeyamandulo kwaye ijolise kwiimvakalelo zenyama, imfuno, umnqweno wenyama.
Ewe kunjalo, ayisiyiyo yonke imibongo egxile kwezi zihloko, Kukwakho nenkxalabo ngabantu, yokufa, eyenzekayo xa isondela, kwanemfihlelo yendalo.
Ngokubhekisele kwiintsomi kwincwadi yakhe, usebenzisa aba bantu basentsomini ngokungathi yayiyimbonakalo yento umbhali ngokwakhe ayivayo, nokuba ingayinto "yothando" okanye umbono wombongo wehlabathi njengoko elibona. Ayisiyonyani ukuba le ncwadi isekwe kwiintsomi, okanye ibalisa kuphela iintsomi ngendlela yemibongo. Ngokwenyani, into ayenzayo umbhali kukusebenzisa la manani asentsomini, ahlawuliswe iimvakalelo kwaye emele abanye, kwimibongo yakhe, ngaloo ndlela ephumeza inkanuko, inkathalo ngakumbi nangaphezulu kwayo yonke into etolikwa yimisebenzi yakhe.
Okokugqibela, ngokubhekisele kumxholo wehlabathi, indlela abantu abanxibelelana ngayo, ukuba bahlala njani, umbhali uyibalisa, kuye, nakwimbongo yakhe, kuba yayiyeyona nto ibaluleke kakhulu. Ngapha koko, lukhona utshintsho olukhulu kuRubén Darío okoko Uyayeka ukuba yimbongi engakhathali nokuba imibongo yakhe ineempazamo okanye ayitolikwa ngokuchanekileyo; ukufuna okuninzi kuwe kwaye sikhangele ukuba loo misebenzi iya kuhlala ngonaphakade.
Yintoni yonke imibongo equlunqwayo?
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uhlelo lokuqala lweprosas profanas kunye nolwesibini lwahlukile ngokusisiseko ekufakweni, ekugqibeleni, kwemibongo emithathu emitsha. Ke, abo bayila le ncwadi zezi zilandelayo:
Iprose prose (njengecandelo, elinemibongo elandelayo):
Yayingumoya othambileyo ...
Yiyo, missa est
I-Colloquium yee-centaurs (njengecandelo ngokwalo). Inombongo weCalloquium wee-centaurs zeevesi ezingama-212.
Iyahluka (njengecandelo). Ngale mibongo ilandelayo:
I-Symphony kwiGrey Major (umbongo wakudala wazo zonke eziqokelelweyo).
IVerlaine (njengecandelo). Ngemibongo:
Uphononongo lwezinto zakudala (njengecandelo). Ngemibongo:
Ubukumkani bangaphakathi (njengecandelo nombongo).
Izinto zeCid (njengecandelo nombongo).
I-Dezires, layes kunye neengoma (njengecandelo). Ngemibongo:
Ingoma, Olo thando alwamkeli umtya
Couplet ethe saa
Ii-amphoras ze-Epicurus (njengecandelo). Ngemibongo:
Sithande isingqisho sakho ...
Kumfundisi uGonzalo de Berceo
Ndileqa indlela ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » "Prosas profanas" into entsha nguRubén Darío
UAna Jacqueline sitsho
Kubonakala kum kungathandeki kakhulu ukubeka ulwazi xa lungafumaneki kwi-facebook kuphela, sukuyipapasha ukuba akukho
Phendula Ana Jacqueline
NguAna oyinyani, Aba bastard…. zililize ...
Igama le rose kwaye Musa ukuthetha nabantu ongabaziyo. Imdidlalo eqhubayo yeTV